Ny taila vita amin'ny PVC translucent dia mamorona tranombakoka sary hosodoko Aesthetic
Lianzhou Photography Museum (LPM) dia nofantenana haorina eo amin'ny Zhongshan South Road, izay antsoin'ny olona ao an-toerana amim-pitiavana hoe "arabe taloha". Feno fomban-drazana sy fahatsiarovana ao an-toerana. Fitehirizam-boky tranainy ny toerana voalohany, izay...
Karazana taila inona no safidy mety ho an'ny Factoy? Inona no loko tokony hofidiko?
Miaraka amin'ny fandrosoan'ny fiaraha-monina sy ny fampandrosoana ara-toekarena, ny olona dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fisafidianana ny fitaovana fanorenana tafo, ary ny taila orinasa dia tsy an-kanavaka. Na ny endrika ivelany na ny fampisehoana anatiny dia tsy afaka mihaona intsony ny kapila tanimanga nentim-paharazana ...
Taila vita amin'ny resin synthetic hananganana tobim-pianarana tsara tarehy ho an'ny mpianatra
Olana lehibe mifandraika amin'ny fiarovana ny mpianatra ny fifantenana ny fitaovam-panorenana. Noho izany, rehefa manorina sekoly, ny fisafidianana ny fitaovana dia tsy maintsy malina tsara. Ny kojakoja mahazatra, toy ny taila tanimanga sy taila vita amin'ny glazed, ar...
Tile PVC Anti-corrosion hamahana ny ahiahy amin'ny harafesina mahery vaika amin'ny toeram-pambolena
Noho ny tontolo iainana manokana dia manimba ny toeram-pambolena. Taloha, ny toeram-pambolena dia naorina tamin'ny lovia vy loko, fa ny fiainana fanompoana ny lovia vy loko dia tsy ela, izay mora harafesina, harafesina sy ny ranonorana mitete. izaho...